Dhegeyso(Daawo) Dhalinyaradii sida dhagareysan lagu askareeyay oo weli ka baxsanaya xeryaha ciidamada. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Dhegeyso(Daawo) Dhalinyaradii sida dhagareysan lagu askareeyay oo weli ka baxsanaya xeryaha ciidamada.
Last updated May 20, 2020 442 0
Qaar ka mid ah dhalinyaro dowladda federaalka ah sideed bilood ka hor su qayaano ah ku askereysatay ayaa ka soo baxsaday xera ciidan oo ku taalla Magaalada Baardheere ee Gobalka Gedo kaasoo ka dhigan xabsi kor uun ka furan maadaama in laga baxaa adag tahay.
Dhalinayradana qaarkood ayaa la soo afduubay halka kuwa kalena loo sheegay in dowlada qadar ciidan ahaan u qaadanayso iyaguna ay bishii helayaan mushaar kumanaan doolar ah laakiinse diyaaraddii loo sheegay in ay qadar geyneyso ayaa ka dejisay garoonka amxaaradu haysato ee ku yaalla magaalada Baardheere.
Sadax ka mid ah dhalinyarada oo jirdil, cunno xumo, handaad iyo dhibaatooyin kale la soo kulmay ayay dhawaan u suura gashay in ay baxasadaan kadibna ay isu dhiibaan xarakada shabaabul mujaahdiin.
waxaa jirkooda ka muuqda qaarka mid ah nabaradii ka dhashay jirdilka loo geystay intii ay xoriyad la’aanta ahaayeen.
Iyagoo u waramayay Idaacadda Islaamiga ah ee Alfurqaan ayay si qota dheer uga hadleen dhibaatooyinkii ay la soo kulmeen.
Waxay inta aku dareen in neecaaw qabow soo gashay markii ay soo gaareen dhulka shareecada Islaamka lagu xukumo xarakada shababul mujaahidiina ay kala kulmeen soo dhaweyn diirran.
Dhowr bilood ka hor labataameyo askartaan saaxiibadood ahaa ayaa ka baxsaday saldhigaan ciidan ee ku yaalla baardheere waxayna isu dhiibeen Alshabaab
intii ay wareysiyada ku guda jireenwaxay tilmaameen in markii meesha la geyaynayay ay sadax boqol konton ka badnaayeen iminkana boqol iyo sodon oo keliya goobta uga soo tageen intii kalena ay sidooda oo kale u baxsadeen.
Halkaan ka dhegeyso wareyisyada askarta baxsadka ah